Maxkamad ku Taal Malta oo wiil Somali ah Xukuntay – Radio Daljir
Maxkamad ku Taal Malta oo wiil Somali ah Xukuntay
Febraayo 6, 2016 6:16 b 0
Sabti, Feberaayo 06, 2016 (Daljir) —Warbaahinta Jesiiradda Malta ayaa shaaciyey in Nin Somali oo 21-jir ah lagu xukumay Xabsi 2-sanno iyo ganaax dhan 2,300 ee Lacagta Euro, kadib, markii lagu helay inuu gaari ka dhacay Tuulladda Munaksar ee Konfurta Degmadda Gozo ee dalkaasi, isla markaana uu shil galay.
Eedeysanaha oo shalay la soo taagay Maxkamadda ayaa waxaa kaloo lagu soo oogay inuu diiday in laga qaado Imtixaanka Neefsashada (a breathalyzer test) ee lagu ogaado inuu qofka cabsan yahay iyo in kale.
Eedeysanaha waxa uu gaarigii uu soo dhacay la galay shil, isagoo waxyeello gaarsiiyey 3 gaari.
Dhinaca kale, Garsooraha Maxakmadda waxa uu Eedeysanaha ka mamnuucay in la siiyo Laysinka Wadista Gaadiiska muddo hal sanno ah.
Turkish Airline oo la sheegay in ay Ogayd Qaraxii lagu Xiray Daallo
QM: Somaliya kaalmaha hore ayey kaga jirta wadamada laga Adeegsado Gudniinka Fircooniga ah